fa efa mitondra noho ny fifampikasohana na “cas contact”. Nisy tranga vaovao 6 tao anatin’ny roa andro, ka ny 3 ny alatsinainy hariva, ary tranga 3 vaovao hafa dia omaly talata, izay samy vokatry ny fifampikasohana avokoa. Iray ihany no tena atahorana satria sempotra izy io, hoy ny fanazavana. Mbola tsy nisy ny maty, ary diso ny filazana izany any amin’ny tranonkala tsy tena an’ny OMS. Ny momba ireo vao voa dia 3 tany Toamasina izay lehilahy miisa telo: 20, 37, ary 39 taona ary tsaboina any an-toerana. Lehilahy iray 43 taona sy vehivavy roa izay 52 sy 55 taona kosa eto Antananarivo. Nisy olona 5 vaovao sitrana manome ho 7 ny isan’ireo rehetra efa sitrana ka 2 avy eny Anosiala, 2 avy eny amin’ny Hopitaly manara-penitra Andohatapenaka, 1 teny amin’ny Polyclinique Ilafy. Efa manao ny ainy tsy ho zavatra ny mpiasan’ny fahasalamana. Mandray an-tànana amin’ny fitsaboana vokatry ny antso sy ny fitiavana ny mpiray tanindrazana indrindra amin’ny asa efa neken’izy ireo, hoy ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle mpitondra tenin’ny CCO Covid 19. Raha sanatria misy ny maty dia tsy maintsy hozaraina ihany ny vaovao. Ny irariana dia ho voatsabo soa aman-tsara sy ho sitrana ireo marary, hoy izy.
Aza atao mampivadi-po sy mampisaritaka, vao mainka hanarahana ny toromarika rehetra. Fanajana ny iray metatra, fanakonana vava amin’ny lanton-tsandry rehefa mikohaka, fanadiovana ny fitaovana toy ny faladian-kiraro rehefa ivoaka, fanasana ny tànana amin’ny savony, sasany ny entana rehetra nentina avy any ivelany, atanina andro izay azo atanina andro, hajaina ny fahadiovana, mila mitondra aron-tava manakona, hoy ny toromarika nataon’ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle.